Home News Kooxda Qiyaano Qaran oo Qorshe Xil ka qaadis ah Bilaawday!!
Kooxda Qiyaano Qaran oo Qorshe Xil ka qaadis ah Bilaawday!!
Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yariisow ayaa xalay Mahad Cilmi oo ka tirsan baarlamanka Galmudug u magacaabay gudodomiyaha degmada Waaberi, xilli uu maalmahan magacaabayey gudodomiyeyaal cusub.
Xogtan ayaa muujineysa in sidoo kale lix guddoomiye degmo oo cusub la filayo in dhowaan uu magacaabo Yariisow, ayada oo maalinba mid lagu dhawaaqayo. Magacaabista xilalkan ayaa qeyb ka ah dadaallo lagu qanciyo xildibaano ka tirsan baarlamanka Soomaaliya, oo kaalin weyn ku lahaa ridistii guddoomiye Jawaari, iyo shaqsiyaad kale oo dowladda aad ugu dhow.
Ilo-wareedyo ayaa sheegaya in Yariisow uusan wax shaqo ah ku lahayn magacaabista, ayna ka socoto xafiiska ra’iisul wasaare Kheyre iyo madaxtooyada, oo dhammaan magacyadan usoo gudbinaya gudodomiyaha gobolka Banaadir.
Previous articleXOG:Al-shabaab oo Laga goostay Mushaarad lasiin jiray
Next articleXog dheeraad ah oo laga helaayo Shabaabkii Weeraray Agagaarka Madaxtooyadda!!
Gudiga Gurmadka Qaraxii Ex-kontorool oo shaaciyay in aanan Nolol iyo Geeri...